Fandinihan-tena mba hitomboana ara-panahy
Misy anarana dimy hiantsoana an'i Jesosy Kristy. Tsy anarana fotsiny ihany nefa fa toe-panahiny ihany koa.
Fa Zaza no teraka ho antsika, Zazalahy no omena antsika ; Ary ny fanapahana dia eo an-tsorony, ary ny anarany atao hoe Mahagaga, Mpanolo-tsaina [Na: mpanolo-tsaina mahagaga], Andriamanitra Mahery, Rain'ny mandrakizay Andrian'ny fiadanana.
Voahombo miaraka amin'i Kristy amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona, fa Kristy no velona ato anatiko ; fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny Zanak'Andriamanitra, Izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy.
Fa araka ny itomboanareo amin’ny zavatra rehetra, na amin’ny finoana, na amin’ny teny, na amin’ny fahalalana, na amin’ny fahazotoana rehetra, na amin’ny fitiavanareo anay, dia aoka ho araka izany koa no hitomboanareo amin’izao fahasoavana izao.